Chii chaungaona muShanghai | Kufamba Nhau
Chii chekuona muShanghai
Imwe yenzendo dzinonakidza kwazvo dzatinogona kutora muAsia kushanya kuChina kwakapihwa mutsauko pakati peMadokero neEast. Nyika yakakura zvekuti inopa mikana yakawanda kune vashanyi, kubva kune avo vanotsvaga ruzivo uye vanosangana nezvakasikwa, kune avo vanofarira kushanya kwetsika kana gastronomic.
Mumuganhu weRwizi rweYangtze rwenhema, rimwe remaguta ane vanhu vakawanda pasi rose riripo: Shanghai, iro rave chiratidzo cheguta rinowirirana neChina kufambira mberi kwetekinoroji nehupfumi hweChina.
Kana iwe uri kufunga nezve kutora rwendo kuenda kuShanghai muzhizha rino, hezvino zvinhu zvakanakisa zvekuona nekuita panguva yako yekugara.
3 Musika weJiashan
4 Quarter yeFrance
5 Guta Rekare
6 Bato muShanghai
Iyo Bund ndeimwe yenzvimbo dzinoonekera kwazvo muguta rino. Mariri tinogona kuwana zvivakwa zvakati wandei zvenguva yekoloni ine maitiro eEuropean anokukoka iwe kuti ufambe rwendo rurefu uchitevedza Rwizi Huangpu.
Pakati pevashanyi, rwizi nzizi dziri kudiwa zvakanyanya uye kuona iyi nharaunda husiku chinhu chinotaridzika chemavara nemwenje.
Uye zvakare, kubva kudivi iri remahombekombe kune akanakisa maonero epanzvimbo yemari yePudong nedenga rayo rakakurumbira rakazara nema skyscrapers.
Pudong ndeimwe yenzvimbo dzakakosha kwazvo dzeChina nenzvimbo yemari yeShanghai, iyo yakavakwa mukati memakumi maviri emakore apfuura nekutaridzika kwenguva refu.
Heano Shanghai Worl Financial Center uye inozivikanwa Jinmao Tower, maviri ezvivakwa gumi pakureba kwazvo pasirese. Kana iyo Oriental Pearl Tower inoenda isingazivikanwe nekuda kwekuonekwa kwayo kusingazikanwe. Unogona kutora mukana wekushanya kwako kuPudong kukwira mamwe acho uye kutora mifananidzo.
Jiashan Msika ndeimwe yenzvimbo dzinotonhora kupfuura dzose kuona muShanghai. Heino musika wekunze wekudya wekudya unounganidza matanga evatengesi vanosvika makumi matatu uye inoonekwa seimwe yemisika yakanakisa muguta nekuda kwehunhu hwezvigadzirwa.
Uyu musika unoratidzwawo neyakagadzikana mhepo. Iwe haugone chete kuyedza mhando dzese dzechikafu asiwo kunakidzwa nemakonsuru madiki akarongedzwa nguva dzose kana hunyanzvi, vagadziri uye gadheni mabhaisikopo.
Musika weJiashan wave wakavhurwa wega wega wekutanga newechitatu Mugovera wemwedzi kubvira 2012.
Kwemakore angangoita zana, pakati pa1849 na1946 iyi nzvimbo yeShanghai yaive pasi pekutonga kweFrance uye yaizivikanwa seParis yekuEast. Nhasi ichiri kuchengetedza iyo yeEuropean flair uye yave nzvimbo inonakidza kwazvo yekunakirwa Western cuisine uye kuenda kunotenga.
Muchikamu chino cheShanghai, unogona kushanyira iyo Fuixing Park (yakanyarara, nzvimbo yakachena izere nematsime) uye chivakwa chakasimuka neCommunist Party yeChina, nhasi chashandurwa kuita musamu.
Nzira yakanaka yekuziva Shanghai yeFrance Quarter ndeyekurenda bhasikoro kubva kune imwe yemakambani anoita kutenderera kwakasarudzika kweguta uye kufamba mumigwagwa uchitarisa dzimba dzeEuropean-chimiro dzichakamira.
Nemakore ayo anodarika mazana matanhatu enhoroondo, vashanyi vanowana musimboti weiyo yakasarudzika China muchikamu chekare cheShanghai.
Guta rekare ibasa rinosungirwa kune avo vese vanoda kutsvaga chairo cheShanghai uye kuwana zano rekuti nzvimbo ino yanga yakaita sei mazana emakore apfuura.
Inonyanya kukurudzirwa kushanyira Yuyuan Gardens, mapindu akazvimirira akavakwa muna 1559 uye nemusika wevashanyi padivi payo. Munharaunda mune zvakare mamwe matembere senge Tembere yeMaguta Vanamwari uye kunyangwe mosque, Xiaotayuan Mosque.
Shanghai inonzi ine hupenyu hwehusiku hwakanakisisa muChina sezvo iri guta rine zvakawanda zvinoitika. Guta rine nzvimbo dzinoverengeka uko husiku hwehusiku hunonakidza nemazhinji madisco uye karaoke mabara senge Nanjing Street, Huahai Street kana Lujiazui Ring Street.
Iyo ndeimwe yemamiziyamu akakosha muChina nekutenda kuunganidzwa wayo wakakosha wakaumbwa nezvinhu kubva panguva dzakasiyana dzezvakaitika.
Iyo Museum yeShanghai yakagadzirwa pakati pezana ramakumi maviri emakore kuratidza muunganidzwa wezvidimbu zvinopfuura zana nemakumi maviri ezviuru, zvinosanganisira zvendarira uye zvedongo zvinhu, fenicha, mari uye matampu kubva panguva inopfuura anopfuura makore zviuru zvisere.
Kupinda kwemuziyamu uku mahara saka zvinofanirwa kushanyirwa. Ivo vanovhura madhoo avo mazuva ese pakati pe9am. uye 17h.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » Asia kufamba » China » Chii chekuona muShanghai
Praia, kuenda kuCape Verde